Madaxweynaha Mareykanka ayaa hadaladan ka sheegay shirka jaraa'id ee uu ku xaqiijiyey geerida horjoogahan.
WASHINGTON, US – Madaxweyne Donald Trump ayaa Axada maanta ah ku dhawaaqay in Abuubabar Al Baqdaadi, hogaamiyihii Daacish, uu ku dhintay howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen dalka Suuriya.
Howlgalka oo ka dhacay waqooyi barri dalkan Carbeed habeenimadii Sabtida ayaa ka dhacay tuulo ku dhow magaaladda Idlib.
Diyaarado nooca qumaatiga u kaca iyo ciidamo Ameerikaan ah ayaa la rumeysan yahay in ay ka qeyb-qaataan gulufkan weynaa.
Trump ayaa shaaciyey in Baqdaadi uu ku dhex-geeriyooday god dhulka hoostiisa ku yaala oo uu isku qarxiyey markii ciidanka Mareykanka ay soo hareeyeen hoygiisa. Saddex caruur oo wehlisay la dhimatay.
Sidda laga soo xigtay Trump, 11 kale oo caruur ah ayaa laga soo badbaadiyey hoygiisa, kuwaas oo haatan caafimaadkoodu sareeyo.
Dagaalameyaal kale oo tiradooda uusan shaaca ka qaadin ayuu Trump ku nuux-nuux saday in ay sidoo kale ku khaarijiyeen howlgalka.
"Xaqiijinta in uu Baqdaadi yahay waxaan ku sameynay 15-daqiiqo," ayuu Trump yiri, isaga oo sharaxaya baarista DNA-ga hogaamiyihii ISIL.
Askari Ameerikaan ah ayuu ku adkeystay in uusan waxba kasoo gaarin howlgalka. "Balse hal Ey Ameerikaan oo heer sarre ah kaasoo qurux badan ayaa ku dhaawacmay," ayuu raaciyay.
Dalalka kala ah; Turkiga, Ruushka, Suuriya, Ciraaq iyo falaagadda Kurdiyiinta oo uu u mahad-celiyay ayuu cod dheer ku qeexay in ay Mareykanka ka caawiyeen gulufka.
"Dhowr isbuuc ayaan dabagal ku haynay Baqdaadi," ayuu hoosta ka xariiqay Trump, kaasoo ka dhawaajiyay in dhowr jeer ay baajiyeen howlgalo lagu dili karay horjoogahan.
Intii uu shirka jaraa'id ku jiray, Trump ayaa ka dhawaajiyay sifooyinka "qaab daran" oo uu yeeray Baqdaadi oo gedaashiisa "ay dunida noqoneyso mid amni ah maadaama la khaarijiyey cadowgii ugu weynaa dunida".
Mar uu ka hadlayey shaqsiyadiisa uuna ayidday sheegashooyinka ku aadan in caafimaadkiisu liitay, Trump wuxuu yiri: "Wuxuu ahaa nin xanuunsan oo murugeysan".
Donald Trump ayaa mar uu sharaxayay qaabka uu u dhintay wuxuu yiri: "Saaxiibadii waxay u baahan yihiin in ay sheegaan qaabka uu u dhintay, ma ahan sida halyeey waa sida sidda eygii iyo qaab fuleynimo ah".
"Baqdaadi wuxuu waayihiisii u dambeeyay ee dunida uu ku qaatay cabsida ciidamada Mareykanka. Wuxuu ahaa xayawaan aan aqoon badan lahayn," ayuu xusay. "Dalkeena waxay u ahayd maalin weyn oo fiican".
Abuubabar Al-Baqdaadi oo ku dhintay da'da 48-sano jir, ayaa markii ugu dambeysay ee shaashadaha uu kasoo muuqdo waxay ahayd horaantii sanadkan, markaas oo kooxdiisu lumisay dhul badan oo Suuriya ah.
Abuubabar Al-Baqdaadi: Dunida oo ka falcelisay geerida hogaamiyihii ISIL
Caalamka 28.10.2019. 11:18
Dowladdo ka hadlay warka ku saabsan dhimashada hogaamiyihii Daacish ayaa soo bandhigay ooraah kala gedisan.
Mareykanka oo soo bandhigay "caddeynta" dhimashada Baqdaadi
Caalamka 31.10.2019. 09:08
Mareykanka oo weerar dhanka cirka ah ku dilay afhayeenkii Daacish
Caalamka 28.10.2019. 11:51
Afar qaraabo dhow la ah Al-Baqdaadi oo nolosha lagu qabtay
Caalamka 17.11.2019. 15:34